भर्खरै मात्र ४५ जनामा कोरोना देखिएपछी निषेधाज्ञा लगाउन सेना परिचालन, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/भर्खरै मात्र ४५ जनामा कोरोना देखिएपछी निषेधाज्ञा लगाउन सेना परिचालन, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !!
पर्सा र बाराका थप ४७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। गएराति नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा पर्साका ४५ र बाराका दुई जनामा कोरोना देखिएको अस्पतालमा डा.निरज सिंहले बताए। उनका अनुसार उनीहरुमध्ये १० जना महिला छन्।
अस्पतालका नयाँ संक्रमितहरुमध्ये पोखरिया नगरपालिकाका १२, पर्सागढी नगरपालिकाको बागबाना र पचरुखीमा दुई तथा बहुदरमाई नगरपालिकाको भौराटारमा पनि एक जनामा कोरोना देखिएको छ। लक्षणसहित कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि वीरगञ्जमा काडाई गरिएको छ । पछिल्लो समय कोरोनाको हटस्पट बन्दै गएको पर्साको वीरगञ्जमा जारी निषेधाज्ञा आजबाट थप कडाई गरिएको हो । जसका लागि आजबाट सडकमा सेना परिचालन गरिएको छ ।
कोरोनाले जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत सर्वसाधारणहरुमा संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा मृत्युदर समेत बढेकोले पर्सामा थप कडाईका साथ निषेधाज्ञा लागू गरिएको हाे । हालसम्म पर्सामा कोरोना संक्रमितको संख्या १२ सय नाघिसकेको छ । वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको मातहतमा दुईवटा अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा छन् । गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पतालमा ६९ जना संक्रमितहरु उपचाररत छन् ।
कोरोनाले जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत सर्वसाधारणहरुमा संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा मृत्युदर समेत बढेकोले पर्सामा थप कडाईका साथ निषेधाज्ञा लागू गरिएको हाे । यसबाहेक वीरगन्जका होटल, धर्मशाला, विद्यालय, निजी अस्पताललगायतका सेमी–आइसोलेसनमा दुई सय ३९ जनाको उपचार भइरहेको छ । ३७४ जना संक्रमित भने होम आइसोलेसनमा रहेका छन् ।
संक्रमितमध्ये अधिकांश लक्षणसहितका बिरामी रहेका छन् । ३६ जना आईसीयूमा छन् । पर्साकै बिन्दवासनी र देवरवानामा दुई जनालाई संक्रमण भएको छ। अन्य संक्रमितहरु वीरगञ्जकाे विभिन्न स्थानका रहेकाे अस्पतालले जनाएकाे छ। त्यस्तै गरी नारायणी अस्पतालको आइसोलेसनमा पाँचजनाको उपचार भइरहेको छ ।